Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 5 - Blockchain Izindaba
Zibandakanye wekhasi Ukuhweba
ukuhweba Asemphethweni ingenye enenzuzo kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo amasu okuyingozi kakhulu abahwebi mfihlo. Lelisu kufanelekile kuphela abadlali abanolwazi abakulungele incur ukulahlekelwa ezinkulu zezimali.
Ngo wekhasi Ukuhweba, a cryptotrader kuthatha imalimboleko broker, e obuso exchange avame loan, ngokunikeza inani eseduze – ohlangothini. Ngesikhathi esifanayo, Inzalo ngisebenzisa i loan. Ngakho, a cryptotrader ongonga endaweni cryptocurrency okweqa ibhalansi.
Kunezinhlobo ezimbili eyinhloko wekhasi Ukuhweba: kuba nesikhundla eside, noma umdlalo ukufuya, lapho abadayisi ubeka iqiniso ukuthi ifa mfihlo luyokhula intengo, nokuba nesikhundla okufutshane, noma umdlalo ukuwa, lapho izinga uya yokuthi inani cryptocurrency uzokwehla. Nokho, uma intengo kwempahla mfihlo sina liyashona ngenkathi ngidayisa kuyanda, ke uma ifinyelela iphuzu elithile ezibucayi, abadayisi ungalahlekelwa yonke yesibambiso ngenxa margin ucingo – lokuvala ophoqelelwe wumthengiseli kuthengiselana, uma abadayisi akangezanga izimali ku-akhawunti. Uma izimali ezibolekwe ziyasongelwa, exchange unelungelo lokuthathwa njengomsulwa sidonsa ekulahlekelweni kusukela idiphozi akhawunti abadayisi sika wekhasi.
Kukhona amacala lapho abadayisi, ngubani okokuqala kwadingeka abhekane ukulahlekelwa sina, anqume ukukhulisa amanani and win emuva izikhundla zabo esikhundleni ukulahlekelwa nokwamukela. Okuvame ukuholela ukulahlekelwa ngisho enkulu.
Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 4 Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 1
Thumela Previous:Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 4
Thumela Landelayo:luhlobo okusha eQuebec iqala Bitcoin yezimayini imisebenzi
May 21, 2018 ngesikhathi 2:22 AM
May 29, 2018 ngesikhathi 2:15 AM
May 30, 2018 ngesikhathi 6:11 PM
Juni 3, 2018 ngesikhathi 2:08 AM
Juni 4, 2018 ngesikhathi 8:29 PM